အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ပန့်ရော့ခ်ကာတွေ ရဲ့ ရွေ့လျား အခမဲ့ဈေးဆိုင် - Cele GabarCele Gabar
အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း၊ မိသားစုတိုင်း မိသားစုတိုင်းမှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ ပစ္စည်းတွေအနည်းနဲ့အများ ရှိနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအသုံးမလိုတော့တဲ့ ပစ္စည်းတွေက တချို့မိသားစုတွေအတွက် အသုံးဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ လူတချို့မလိုအပ်တော့တဲ့ ပစ္စည်းတွေ လိုအပ်တဲ့ လူတချို့ဆီရောက်ရှိစေဖို့အတွက် Free Mobile Shop (ရွေ့လျား အခမဲ့ဈေးဆိုင်) ကို ရန်ကုန်မြို့ နေ လူငယ်လေးတွေက စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။လူငယ်တွေရဲ့ လမ်းဘေးတီးဝိုင်းတွေမှာ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးခြင်းကိုခံရတဲ့ ပန့်ရောခ်ကာ တွေ လည်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဒီဈေးဆိုင်လေးရဲ့ အောင်မြင်မှု က အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခမဲ့ ဈေးဆိုင်မှာ ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ အခကြေးငွေပေးစရာမလိုဘဲ မိမိတို့ရဲ့ အလိုအပ်ဆုံး အရာတစ်ခုကို ၀ယ်ယူနိုင်တာထူးခြားချက်တစ်ခုပါ ။
“အဲ့ဒီနေ့ (၁၅ရက်နေ့)က အခမဲ့ဈေးလာဝယ်သူတွေဟာ တော်တော်ကိုရိုးသားကြပါတယ်။ ဈေးမ၀ယ်ခင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေကြောင့်ပဲလား (ဒါမှမဟုတ်) ပင်ကိုအသိစိတ်ကြောင့်ပဲလားတော့မသိပါဘူး။ တစ်ယောက်ကို ပစ္စည်းတစ်မျိုးစီပဲ ၀ယ်ယူကြပြီ..ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ဟာကို သေချာရွေးပြီးမှ ၀ယ်ယူကြပါတယ်။ လောဘစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အလကားရရင် ဘာဖြစ်ဖြစ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေ မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။” လို့ ဈေးဆိုင်လေးကိုစီစဉ်တဲ့ ကိုကျော်သူဝင်း က ရေးသားထားပါတယ်။ အခမဲ့ဈေးဆိုင် လှုပ်ရှားမှုရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မုဒိတာပွားများနိုင်ကြဖို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Free mobile shop movement!!!
What is free mobile shop?Free mobile shop isasocial movement aimed at sharing things without involving money or profit. Money has desensitized us and has started to prevent us from recognizing our shared humanity.Why do we start this movement?In every house, in every family, there will be some things which are not needed anymore. Maybe those unneeded things are useful for some other people and families. Our free mobile shop is founded to present unneeded things from some people to the people who really need them. At our free mobile shop, you can sell or buy anything without money. Our world has been consumed by materialism and because of that our compassion and sharing spirit are getting less and less. We agitate not to sink into material wealth, but to share the things we don’t need with the other people. So, this is the movement to expand our compassion and sharing spirit, not based on money.
Posted by The Rebel Riot Band on Sunday, November 18, 2018
အတိုငျးအတာတဈခုထိ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ပနျ့ရော့ချကာတှေ ရဲ့ ရှလြေ့ား အခမဲ့ဈေးဆိုငျ
အိမျတိုငျး အိမျတိုငျး၊ မိသားစုတိုငျး မိသားစုတိုငျးမှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ ပစ်စညျးတှအေနညျးနဲ့အမြား ရှိနကွေပါတယျ။ အဲ့ဒီအသုံးမလိုတော့တဲ့ ပစ်စညျးတှကေ တခြို့မိသားစုတှအေတှကျ အသုံးဝငျနနေိုငျပါတယျ။ လူတခြို့မလိုအပျတော့တဲ့ ပစ်စညျးတှေ လိုအပျတဲ့ လူတခြို့ဆီရောကျရှိစဖေို့အတှကျ Free Mobile Shop (ရှလြေ့ား အခမဲ့ဈေးဆိုငျ) ကို ရနျကုနျမွို့ နေ လူငယျလေးတှကေ စတငျမိတျဆကျလိုကျပါတယျ။
လူငယျတှရေဲ့ လမျးဘေးတီးဝိုငျးတှမှော သညျးသညျးလှုပျအားပေးခွငျးကိုခံရတဲ့ ပနျ့ရောချကာ တှေ လညျးပါဝငျခဲ့တဲ့ ဒီဈေးဆိုငျလေးရဲ့ အောငျမွငျမှု က အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ရောကျရှိခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။ အခမဲ့ ဈေးဆိုငျမှာ ရောငျးခတြဲ့ပစ်စညျးတှဟော အခကွေးငှပေေးစရာမလိုဘဲ မိမိတို့ရဲ့ အလိုအပျဆုံး အရာတဈခုကို ဝယျယူနိုငျတာထူးခွားခကျြတဈခုပါ ။
“အဲ့ဒီနေ့ (၁၅ရကျနေ့)က အခမဲ့ဈေးလာဝယျသူတှဟော တျောတျောကိုရိုးသားကွပါတယျ။ ဈေးမဝယျခငျက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လကျကမျးစာစောငျတှကွေောငျ့ပဲလား (ဒါမှမဟုတျ) ပငျကိုအသိစိတျကွောငျ့ပဲလားတော့မသိပါဘူး။ တဈယောကျကို ပစ်စညျးတဈမြိုးစီပဲ ဝယျယူကွပွီ..ကိုယျ့အတှကျလိုအပျမယျထငျတဲ့ဟာကို သခြောရှေးပွီးမှ ဝယျယူကွပါတယျ။ လောဘစိတျတဈခုတညျးနဲ့ အလကားရရငျ ဘာဖွဈဖွဈယူမယျဆိုတဲ့ လူမြိုးတှေ မတှရေ့သလောကျပါပဲ။” လို့ ဈေးဆိုငျလေးကိုစီစဉျတဲ့ ကိုကြျောသူဝငျး က ရေးသားထားပါတယျ။ အခမဲ့ဈေးဆိုငျ လှုပျရှားမှုရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မုဒိတာပှားမြားနိုငျကွဖို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ
Source – The Rebel Riot Band / Free Mobile Shop – Yangon
Previous Previous post: တနသာင်္ရီတိုင်း ပုလောမြို့နယ်ထဲက ထူးခြားလှတဲ့ ရှင်လောင်းစံ သိုင်းနင်း အက
Next Next post: မြန်မာအသင်းအပေါ် ခံယူချက် ကောင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေချီးကျူးတာ ခံခဲ့ရတဲ့ ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်
သူ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးရိုက်ထားရလို့ ပေါကားလို့မပြောပါနဲ့ဆိုတဲ့ မင်းရာဇာ
Published: December 6, 20182:43 pm
အချိန်တိုတိုလေးအတွင်း ဆို့နင့်ကြေကွဲသွားစေမယ့် ငွေစိုးရဲ့ တကယ်ဝေးခဲ့ရင် MTV
Published: November 30, 20185:46 pm